Qalabka Eyga - Mundo Perros | Eeyaha Dunida
Adduunyada eeyaha wax badan baa is beddelay maantana waan haysannaa dhammaan noocyada kala duwan ee wax looga dhigayo maalinteenna maanta iyaga la jira. Si aan micne lahayn uma aha ninka ugu fiican saaxiibkiis, sidaa darteed wuxuu u qalmaa dhammaan daryeelka aan siin karno. Waxaan u kala saari karnaa qalabyada adeegsiga aan siinno, si aan ugu fududeyno hawsha ah in aan isku mashquulno adduunyo bixiya waxyaabo badan oo badan
ka qalabyada loo isticmaalo eeyaha ku dhowaad waa dunida kala, ma aha oo kaliya sababta oo ah utility in kuwaas la soo sheegay, laakiin sidoo kale by qurxinta. in Eeyaha Dunida waxaan ka heli doonaa macluumaadka ugu fiican ee ugu dambeeyay isbeddellada arrimaha canine, laga bilaabo silsilado ama buugaagta loo yaqaan 'puppy' iyo eyda qaangaarka ah, haddii dabool ama a leash, isticmaalka muzzal, muraayadaha indhaha ee indhaha, dallad, kuwa dib u iibiya ama daawada cadayga, xitaa qalabka galmada ee eeyaha.
Sidee wax aan macquul aheyn looga wada hadlayaa dhamaan qalabka eyga ee jira, waxaan ka hadli doonaa qaar ka mid ah iyadoo loo eegayo qaybaha. Laga soo bilaabo qalabka maalinlaha ah ee aan u isticmaalno kuwa nadaafaddaada ah ama kuwa xitaa layaabka leh iyo kuwa cusub.
Qalabka maalin kasta
Maalinba maalinta ka dambeysa eeygu wuxuu ka kooban yahay qaybo ka mid ah qalabyada xitaa aasaasiga ah. Ka hor inta eeygu guriga imaanin waxaan horeyba u haysannaa in yar oo guriga ku diyaarsan. Marka waxaan dib u eegi karnaa qalabkan si aan ugu caddayno waxa loo baahan yahay maalin-ka-maalin eey. Marka horeba, waxyaabaha aasaasiga ah waxaa ka mid ah dhig meel eygu seexan doono, taas oo aan u baahanahay a sariirta eyga. Xilligan waxaa jira moodooyin aan tiro lahayn. Sariiraha leh dharka, leatherette-ka si ay ugu fududaato in la nadiifiyo, oo leh balaastik ama qolof qolof ah iyo gaar ahaan sariiraha ka samaysan xumbo oo u roon eeyaha oo dhan. Waxaan iibsan karnaa sariiro wareegsan ama afar gees leh iyo sariiro leh qaabab asli ah. Laakiin wax walba ka sarreeya waa inaan ka fikirnaa cabirka eeyga, si sariirta ay ugu filnaato isaga.
Qalab kale oo ay maalin kasta isticmaali doonaan ayaa ah ka kuwa eyda quudiya iyo kuwa waraabiya. Waxaa jira kuwa caag ah laakiin kuwa birta ah ayaa had iyo jeer lagugula taliyaa, taas oo shaki la'aan in badan sii socon doonto. Qaar ka mid ah kuwa u muuqda inay ku habboon yihiin eeyaha oo dhan ayaa ah kuwa sidoo kale leh qayb caag ah oo aan sibiibix ahayn salka, kana ilaalinaya eeyga inuu jiidayo quudiyaha inta uu wax cunayo ama cabbayo. Sidoo kale waa suurtogal in la helo waxyaabo casri ah, sida kuwa quudiya oo u siiya cuntada hadba sida loogu baahan yahay, laakiin kuwan waxaa loo isticmaalaa oo keliya haddii aan eeyga keligood ka tagno muddo dheer.
Dhinaca kale, socodku waa u muhiim eeyga, markaa waa inaan ku qasban nahay iibso xadhigiisa iyo silsiladdiisa ama suunkiisa si aad ugu lugeyso socod. Waqtigan xaadirka ah adduunyo dhan oo suurtagal ah ayaa naga horreeya. Muhiimadu waa in la iibsado a silsilad eyda In ay ku habboon tahay cabbirkiisa si uusan u baxsan, oo ay u raaxeyso iyo inuu xoog badan yahay haddii eey jiidato oo weynaato, si uusan u jabin. Way fiicantahay in laga fogaado xargaha tayada liita ee na siin kara cabsi badan. Xirmooyinka ayaa noqday kuwo caan ah laakiin laguma talin karo haddii eeygu wax badan jiidayo, maxaa yeelay dib uma dhigayo wax badan markii jirka oo dhan uu jiidayo oo kaliya qoorta ma ahan, sida xarigga. Iyadoo lala kaashanayo suunka, waxaan sidoo kale u baahan doonnaa bacaha wasakhda leh boorsada haysta, taas oo maanta ay fududahay in la helo.
ka alaabta carruurtu ku ciyaaraan ayaa sidoo kale qayb ka ah nolol maalmeedka eeyga, si aan qaar kaaga iibsano. Noocyo badan ayaa jira, laga bilaabo tooy jilicsan eeyaha yaryar alaabta lagu ciyaaro ee leh xargaha ama kubadaha adag. Kuwa ugu badan ee la raadiyaa waa alaabada lagu ciyaaro ee qarinaysa abaalmarinta gudaha una oggolaaneysa in la madadaaliyo muddo dheer.
Markii aan safar la galnay xayawaanka marwalba waa inaan ku darnaa qalabyo runtii faa'iido leh. Mid ka mid ah waa xamuulka. Waxaan horeyba kaaga sheegnay noocyada eeyaha qaada, sidaa darteed qof kastaa waa inuu doortaa midka ugu habboon xayawaankiisa, ha noqoto bacda, boorsada ama qafiska birta ah. Meelo badan xitaa waa shuruud qasab ah in la qaado, marka waxaan u baahan doonnaa mid haddii aan rabno inaan dunida ugu dhex wareegno eyga.
La dabool kuraasta gaariga Waa ikhtiraac kale oo weyn oo qof kasta oo xoolo haysta uu iibsado. Daboolka kursiga ee ka caawiya in laga fogaado inuu nadiifiyo gaariga saacado ka dib qaadashada eyga, gaar ahaan haddii uu daadinayo timo badan. Waa raaxo, fududahay in la xidho oo la ilaaliyo gogosha, xitaa haddii eeygu hunqaaco. Hal abuur
Dunida dharka eyga waxay kaloo sameysaa qoraal aad u dhameystiran. Waqtigan xaadirka ah waxaan heleynaa dharka eyda nooca shaqeeya, sida koodhadhka roobka si looga ilaaliyo roobka ama dharka diiran eeyaha leh dhogorta yar. Laakiin sidoo kale waxaa jira isbeddel loo adeegsado dharka eyga maxaa yeelay waa moodel, gaar ahaan noocyada yaryar ee iyagu isku amaahiya naqshadaha quruxda badan. Xitaa waa wax iska caadi ah in la arko kabaha eyga, in kastoo eeyaha eyda ku dhex socdaan barafka ay lagama maarmaan u yihiin inay difaacaan suufkooda.
Nadaafadda eygu waa mid aad muhiim u ah, sidaa darteed waa inaan sidoo kale tixgelinno alaabada ku jirta suuqa. Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ayaa noqon doona shanlooyinka eyga. Waxay kuxirantahay nooca timaha aad leedahay, waa inaan iibsano mid ama midkale. Waxaa jira burushyo khaas ah oo loogu talagalay dhogorta laba-laaban, ee timaha dheer, qalooca ama qalafsan. Waxa kale oo jira qalabyo fududaynaya hawshan haddii eeygu leeyahay timo gaagaaban oo caadi ah, sida mittens-ka si loogu shanleeyo.
Haddaan ka mid nahay kuwaas waxaan dooneynaa inaan timo jarista ku sameyno guriga si aan wax yar u badbaadino, waxaan iibsan karnaa a Wax alaab ah lama helin.. Waxaa jira kuwo aad u dhameystiran, oo wata mashiinka, maqas iyo madax kala duwan. Tan waxaan ku noqon karnaa stylists eeyahayaga.
Qalabka nadaafadda waxaan ka heli karnaa waxyaabo kale oo badan, sida a xirmada nadiifinta ilkaha. Waxyaabahan noocan ahi waxay nolosha nooga fududeyn karaan xayawaannadayada sidoo kale waxay naga caawin karaan inaan booqashooyin ku tagno dhakhtarka xoolaha si aan badnayn, maadaama aan ilkahooda ku hayn doono xaalad kaamil ah.
Qalabka eyda cajiibka ah
Qalabka maanta la heli karo wuxuu dabooli karaa baahiyo badan. Haddii aan sahamino dukaamada internetka waxaan ka heli doonnaa waxyaabo aad u xiiso badan. Tusaale ahaan, waad iibsan kartaa un agility agility eygaaga inuu bilaabo tababarka isboortigaan, ama kaliya inuu baashaalo.
Agabka qubeyska eey: xayawaankaagu waa nadiif oo dhalaalaya
by Ma aha Cherry samee Toddobaadyada 3 .
Qubaysiga eygaaga wuxuu noqon karaa waqti qosol badan iyo dhibaato (gaar ahaan haddii faqrigu aanu jeclayn...
Qalabka safarka ee la taaban karo oo la qaadi karo ee eeyaha
by Ma aha Cherry samee Toddobaadyada 4 .
Haddii aad u safrayso Cuenca ama haddii aad booqanayso kaynta madow ee fog, xagaaga ayaa soo socda…
Kubadaha eeyaha, waxa ugu fiican saaxiibkaaga ugu fiican
by Ma aha Cherry samee 1 bishii .
Kubadaha loogu talagalay eeyaha waa shay aan la kala sooci karin oo ka mid ah xayawaankan: imisa jeer ayaan ku arkin filimada ...
Kareemada eeyaha ee qoyaanka leh ee lugaha iyo sanka
by Ma aha Cherry samee Bilaha 2 .
Inkasta oo ay u ekaan karto doqonimo, kareemka huurka ee eeyaha ayaa aad lagama maarmaan u ah si loo ilaaliyo maqaarka xayawaankayaga ...
Buraashka cadayga eeydu waa mid ka mid ah siyaabaha lagu ilaalinayo nadaafadda ilkaha ee xayawaankeena…
Iskoobarrada eeyaha ugu fiican ee nooc kasta ah
Iskoobarrada eeyaha eey badanaa waxaa loo qaybiyaa laba nooc, iyadoo ku xiran haddii ay yar yihiin ama ay weyn yihiin, laakiin ...
Bustayaal Eeyaha ugu Fiican ee Nooc kasta ah
Busteyaasha eyda kaliya ma buuxiyaan shaqadooda ilaalinta fadhiga ama in ay sameeyaan sariirta…
Cuntooyinka fudud ee eeyaha: daawaynta macaan ee xayawaankaaga
by Ma aha Cherry samee Bilaha 4 .
Cuntooyinka fudud ee eeyadu waa, ka dib cuntada aan siino xayawaankeena maalinlaha ah, qayb caadi ah…
suumanka kursiga eey
Suumanka fadhiga ee eeyaha waa lama huraan marka eyga nala qaadanayo...
Sanduuqyada hoose ee ugu fiican ee eeyaha: waxa ay yihiin iyo sida loogu isticmaalo eeygaaga
by Ma aha Cherry samee Bilaha 5 .
Bog-hoosaadka eeydu waxay leeyihiin laba hawlood oo waaweyn (badanaa loo isticmaalo in lagu diiriyo ama lagu foorarsado) waxayna faa'iido u leeyihiin…
Dambiisha baaskiilka ee eeyaha, u qaado xayawaankaaga si raaxo leh oo badbaado leh
Taageerayaasha baaskiil wadida iyo deegaanka, dambiisha baaskiilka ee eeyaha waxay u noqon kartaa door weyn...
Waa maxay dhuumaha maxaase loogu talagalay?